Akụkọ - Gịnị mere m ji ebu mberede na-eme mkpọtụ gabiga ókè?
Jingnai Machinery bụ a na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ agba enterprise tụnyere R&D, mmepụta na ahia. Companylọ ọrụ a dị na obodo Liaocheng, mpaghara Shandong. Anyị nwere ike inye ọkwa P0 dị mma (Z1V1), P6 (Z2V2), P5 (Z3V3). Thelọ ọrụ ahụ enwetawo ISO9001: 2008 na IATF16949: asambodo sistemụ 2016. Anyị na-emepụta nkenke dị elu na bearings dị elu mgbe niile. Ugbu a, biarin anyị na-ekwekọghị na ọtụtụ anụ ụlọ na ndị mba ọzọ OEM ahịa, na exported na European Union, South America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na Middle East na ndị ọzọ na 30 mba.
Mmadụ Bịa gị ase na iji. Daalụ!
Site na December 09-12, companylọ ọrụ anyị ga-aga China Ngosipụta Mmepụta China International na Shanghai, Booth No bụ 3HD094, nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata.
Site na Disemba 2th ruo Disemba 5th na 2020, ụlọ ọrụ anyị na-esonye na Automechanika Shanghai ， Booth Nke 1.1H91, nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata.
Site na November 24th ruo 27th na 2020 ụlọ ọrụ anyị ga-esonye na Bauma CHINA 2020, Booth No bụ N3686. Nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ka ha gaa ma kpaa nkata.
Site na Disemba 3th ruo Disemba 6th na 2019, ụlọ ọrụ anyị na-esonye na Automechanika Shanghai ， Booth Nke 1H91 & 8.1A30 nabatara ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata.
Nọvemba 9-12, 2019 Anyị ga Tehran na-adịgide adịgide Exibition Fairground, booth No. is 3844/2, welcome new and old customers to visit and negotiate.
Nọmba Nọvemba 5-7, 2019, Anyị ga-aga AAPEX SHOW (Las Vegas, NV), ọnụ ụlọ ntu bụ 8431-9, nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata.
Ọkt 23，2019 – Ọkt 26 Ọkt, 2019, ụlọ ọrụ anyị kwadoro ihe ngosi PTC ASIA Shanghai 2019.
Bolọ ntu anyị Mba: D4-5, ALLlọ Nzukọ E6. nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata.
Site na Ọktọba 15 ruo nke 19 na 2019 ụlọ ọrụ anyị ga-esonye na nnọkọ 126th nke Canton Fair, Booth No: 8.0J14 & 6.0A17. Na-anabata ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ka ha gaa ma kpaa nkata.
Anyị agaala Moscow International Motor Show na 26th - 29th, Aug, 2019, ụlọ ntu anyị Mba.: HALL8.3 G231-1. Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata
Anyị agaala PHILIPPINES AUTO PUTTS n’oge Jul 24th, 2019 - Jul 26th, 2019, na ụlọ ntu anyị Mba.: 403. Nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie ileta ma kpaa nkata.
Eprel 23-27, 2019, ụlọ ọrụ anyị ga-esonye na Trade Fair maka Autoparts na Brazil (Sao Paulo). Othlọ Nr .: P156. Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ịga leta ma kpaa nkata.
Nbute bụ ihe dị oke egwu na mpempe akwụkwọ ọ bụla na-agbanwe. Ọrụ ha bụ ịkwado ogwe osisi na-agbagharị ma na-ebelata esemokwu iji kwado ngagharị dị mma.
N'ihi ọrụ dị mkpa nke bearings na-arụ n'ime akụrụngwa, ọ dị mkpa iji nyochaa mgbe niile biarin gị maka nsogbu ọ bụla, ebe ị na-ahụ na mmezi na-arụ n'oge.
Ihe ịrịba ama ise na-egosi na ị ga-anọchi ebe ị na-ebu tupu oge agafee
Ọ bụrụ n’ịchọpụta na mkpọmkpọ gị na-ada ụda na mberede, ikekwe ị na-eche ihe na-eme. Gini mere i ji eme mkpọtụ na gịnị ka ị kwesịrị ime banyere ya?
Gụọ na chọpụta ihe ndị na-eme mkpọtụ na usoro ndị ọzọ ị kwesịrị ịme.
Gịnị na-akpata ịba aghara?
Ọ bụrụ na ibu gị ebidata na-eme mkpọtụ mgbe ị na-arụ ọrụ, enwere nsogbu na ntụgharị gị. A na-eme mkpọtụ oke nke ị na-anụ mgbe okporo ụzọ nke agba ahụ mebiri emebi, na-eme ka ihe ndị na-agagharị na-ama ma ọ bụ na-agbagharị n'oge ntụgharị.
E nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme mkpọtụ ma ọ bụkarịkarị mmetọ. O nwere ike ịbụ na mmetọ ahụ mere n'oge echichi nke ihe ahụ, na ihe ndị ọzọ dị na ọsọ ahụ nke kpatara mbibi mgbe ebu ụzọ rụọ ọrụ ahụ.
Ọta na akàrà nwere ike imebi n'oge lubrication nke na-ebu, na-eme ka ha ghara ịdị irè n'ichebe mmebi nke nje - nsogbu kachasị na gburugburu ebe emetọrọ emetọ.
A na-ahụkarị mmetọ n'oge usoro mmanu. Ihe ndị si mba ọzọ nwere ike ịrapara na njedebe nke egbe griiz wee banye n'ime igwe ahụ n'oge relubrication.
Ngwurugwu ndị a si mba ọzọ na-eme ka ọ banye n'okporo ụzọ nke agba. Mgbe amị malitere ọrụ, urughuru ga-amalite imebi raceway nke amị, na-eme ka Rolling ọcha ibiaghachi ma ọ bụ rattle na-eke mkpọtụ na ị na-anụ.
Gịnị ka i kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ịmalite na-eme mkpọtụ?
Zụ nke na-abịa site n ’ebe ị nọ na-ada nwere ike ịdị ka ịhị afụrụ mkpọrọhịhị, mkpọtụ ma ọ bụ mkpọtụ. O di nwute, site na oge ị nuru mkpọtụ a, ihe ị na-eme emezighị nke ọma na naanị ihe ga-eme bụ iji dochie ụda ahụ ozugbo enwere ike.
I nwere ike ịchọpụta na ịgbakwunye griiz n’ịrụ ọrụ gị na-eme ka mkpọtụ kwụsị. Nke ahụ pụtara na ọ doziela okwu ahụ, nri?
O di nwute, nke a abughi ikpe. Gbakwunye griiz ozugbo ị malitere ịmalite mkpọtụ ga-emechi nsogbu ahụ. Ọ dị ka itinye nkedo na ọnya ọnya - ọ chọrọ nlebara anya ngwa ngwa na mkpọtụ ga-alọghachi.
Can nwere ike iji teknụzụ nlekota ọnọdụ dị ka nyocha vibration ma ọ bụ thermography iji buo amụma mgbe o yikarịrị ka ọ ga-adaba na ọdachi ma gbakọọ ebe kachasị ọhụrụ nke ị nwere ike iji dochie nsogbu ahụ.
*Olee otú iji gbochie iburu ọdịda
Ọ nwere ike ịnwa gị ọnwụnwa iji dochie anya arụ ọrụ na-aga n'ihu ma rụọ ọrụ azụmaahịa gị kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị dochie ihe butere ya kamakwa ịchọ isi ihe kpatara ọdịda ahụ. Analysisrụ nyocha ihe kpatara ya ga - amata ihe kpatara nsogbu ahụ, na - enye gị ohere itinye usoro mgbochi iji gbochie otu esemokwu ahụ ịmaliteghachi.
Ijide n'aka na ị na-eji usoro ịka akara kachasị dị irè maka ọnọdụ ọrụ gị yana ịlele ọnọdụ nke akara gị oge ọ bụla ị rụzuru mmezi nwere ike inye aka kpachara anya maka nsogbu nje.
Ọ dịkwa mkpa ijide n'aka na ị na-eji ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka biarin gị. Nke a ga - enyere aka igbochi mmebi ime n'oge usoro ịrịgo.
* Nyochaa biarin gị
Monitoringga n'ihu na-enyocha biarin gị na-enye gị ohere kachasị mma nke ịchọpụta na ịza nsogbu ndị nwere nsogbu gị. Sistemụ nlekota onodu usoro bụ ụzọ dị mma iji chekwaa ahụike nke igwe gị n'okpuru nyocha oge niile.
Na JINGNAI, anyị na-enye SKF nso nke ngwa nlekota ọnọdụ, site na stroboscopes na sensọ vibration na sistemụ nlekota ọnọdụ zuru oke nke jikọtara nke ọma na igwe gị maka nlekota nke ime.
* Were ozi ụlọ
Ọ bụrụ n ’ọ ga-abụ na ọ na-eme mkpọtụ na mberede mgbe ị na-arụ ọrụ, ọ daala. Ọ ka nwere ike ịrụ ọrụ maka ugbu a mana ọ ga-abịarukwu nso na ọdịda dị egwu. Ihe na-akpatakarị mkpọtụ na-eme mkpọtụ bụ mmetọ nke na-emebi ọsọ ndị na-agba agba ahụ, na-eme ka ihe ndị na-agagharị agagharị ma ọ bụ na-amị amị.
Naanị ihe ga - eme ka mkpọtụ na-eme mkpọtụ bụ iji dochie ihe dị na ya. Itinye mmanu mmanu ga - ekpuchi nsogbu a.